Tencent သည် streaming platform Douyu ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ် - Pandaily
Tencent သည် streaming platform Douyu ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်
Jan 28, 2022, 12:31ညနေ 2022/01/28 14:04:41 Pandaily
Tencent သည်၎င်း၏ streaming platform တစ်ခုဖြစ်သော Douyu ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ် ရန်စီစဉ် နေသည်။ရိုက္တာၾကာသပေတး ေန႔က သတင္းေပးပို႔ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပါတီ ႏွစ္ခု စလံုးက သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေပးဖို႔ ျငင္းဆို ခဲ့ၾကပါတယ္။
ရိုက်တာ သတင်းဌာနက Tencent သည် အနည်းဆုံး ပုဂ္ဂလိက ရှယ်ယာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု နှင့်ပူးပေါင်း ရန်စီစဉ် ထားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဘဏ် များနှင့် ညှိနှိုင်း နေ သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Tencent သည် လက်ရှိတွင် Douyu ၏ အစုရှယ်ယာ အများဆုံး ပိုင်ဆိုင် သူဖြစ်ပြီး ၃၇% ပိုင် ဆို င်ပြီး ယခုနှစ်တွင် အရောင်းအ ၀ ယ် ပြီးစီး ရန်ရည်ရွယ်သည်။ Douyu သည် Tencent ၏အဓိက ဂိမ်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ၏ဒုတိယ အကြီးဆုံး ဗီဒီယို ဂိမ်း streaming ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်သည်။
ဒီ ကိစ္စနဲ့ အကျွမ်းတဝင် ရှိ သူတွေကို ကိုးကားပြီး Douyu အမှုဆောင်အရာရှိ တွေက သူတို့ရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အဖြစ် တိုက်ရိုက် ဂိမ်း များကို အခိုင်အမာ ပြောဆို သင့် သလား ၊။ Douyu ၏ ပူးတွဲ တည်ထောင် သူနှင့် ပူးတွဲ စီအီးအို Zhang Wenming သည် ပြီးခဲ့သည့် လက နုတ်ထွက် ခဲ့သော်လည်း တင်းမာ မှုများ လျော့နည်းသွား ခြင်းမရှိသေး ပေ။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် Douyu သည် ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အပြောင်းအလဲများကို ကြေငြာခဲ့သည်။ Zhang Wenming သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကြောင်းပြချက် များကြောင့် ဒါရိုက်တာ နှင့် ပူးတွဲ စီအီးအို ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည်။ ပူးတွဲ တည်ထောင်သူ Chen Shaojie သည် ယခုအခါ ကုမ္ပဏီကို လည်ပတ် နေသည်။
ထူးခြား သည်မှာ Butterfish သည်အခြား ဂိမ်း တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် ပလက်ဖောင်း ဖြစ်သော Huya နှင့်ပူးပေါင်း ရန်စီစဉ် ခဲ့သည်။ သူတို့ ၏အာရုံစူးစိုက် မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီ ချက်အရ Tencent သည် Tiger Ya မှတစ်ဆင့် Butta ၏ရှယ်ယာ အားလုံး ကိုဝယ်ယူ ရန်စီစဉ် နေသည်ဟု အရိပ်အမြွက် ပြောကြားခဲ့သည်။ ငွေပေးငွေယူ ပြီးဆုံး သွားသောအခါ Tencent သည် ပေါင်းစပ်ထားသော အဖွဲ့ကို လွတ်လပ်စွာ ထိန်းချုပ် လိမ့်မည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် Douyu သည် Huya နှင့်ပူးပေါင်း မှု သဘောတူညီချက် အား ရပ်ဆိုင်း ရန် အစီအစဉ်ကို တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် မှတစ်ဆင့် ကြေငြာခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Douyu ကိုပူးတွဲ တည်ထောင်သူ Zhang Wenming သည် ဒါရိုက်တာ နှင့် ပူးတွဲ စီအီးအို ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည်
Betta တစ်ချိန်ကတတိယ သုံးလပတ် စွမ်းဆောင်ရည် ကျေနပ် စရာ မဟုတ် ပါဘူးပြီးခဲ့သည့်နှစ် က၎င်း၏ သုံးလ တစ်ကြိမ် အစီရင်ခံစာ မှာပြ ထားတဲ့အတိုင်း ။ အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Q3 ပလက် ဖော င်း၏ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၂. ၃ ၄၈ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ၆၉ သန်း) ရှိပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၇. ၈% ကျဆင်းခဲ့ပြီး အသားတင် အရှုံး မှာယွမ် ၁၄၃. ၅ သန်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ Q3 တွင် Douyu ၏အ သားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၅၉. ၆ သန်း ရှိသည်။
Tags ∗Tencent | douyu | game live streaming platform | live streaming
Douyu ကိုပူးတွဲ တည်ထောင်သူ Zhang Wenming သည် ဒါရိုက်တာ နှင့် ပူးတွဲ စီအီးအို ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဂိမ်း ဗဟိုပြု တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် ပလက်ဖောင်း Douyu က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကြောင်းပြချက် များကြောင့် Zhang Wenming သည် ကုမ္ပဏီ ၏ဒါရိုက်တာ နှင့် ပူးတွဲ စီအီးအို ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ကြောင်း ယနေ့ ကြေငြာခဲ့သည်။
Industry Dec 07 ဒီဇင်ဘာ 8, 2021
Tim Hougton သည္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈ ထပ္မံျပဳလုပ္
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္က ကေနဒါေကာ္ဖီကုမၸဏီႀကီး Tim Horton က တ႐ုတ္ဖက္စပ္ လုပ္ငန္းအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ၿပီးစီးေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အတိအက်ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေပ။
Industry Feb 26 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 28, 2021
တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီ ဆယ်ခုကို လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ဥပဒေချိုးဖောက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရိုက်ခံရ
အမျိုးသားဈေးကွက်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (SAMR) ရဲ့ သောကြာနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် ကုမဏီပေါင်း ၁၀ဝ ကျော်ဟာ ရာထူးသက်တမ်းလွန်တဲ့အပြုအမူတွေကြောင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာမှာ ဒဏ်ရိုက်ခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Tencent, Tencent နဲ့ Drip trip တို့လို တရုတ်ရဲ့အကြီးဆုံး နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
Industry Mar 12 မတ် 13, 2021